Забур 139 CARS - Nnwom 139 AKCB
1Awurade, woahwehwɛ me mu
na woahu me.
2Wunim mʼasetena ne me sɔre;
wufi akyirikyiri hu mʼadwene mu.
3Wunim mʼadifi ne me nnae mu;
wunim mʼakwan nyinaa mu.
4Ansa na mebue mʼano akasa no
Awurade, na wunim ne nyinaa dedaw.
5Woakata me ho nyinaa ahyia
na wobɔ me ho ban.
6Saa nimdeɛ yi yɛ me nwonwa dodo,
ɛkɔ soro dodo ma me sɛ medu ho.
7Ɛhe na metumi afi wo honhom anim akɔ?
Ɛhe na metumi aguan afi wʼanim akɔ?
8Sɛ meforo soro a, wowɔ hɔ.
Na mekɔsɛw me kɛtɛ wɔ asaman a, wo ni.
9Sɛ mede adekyee ntaban tu
na mekɔtena po akyi nohɔ a,
10mpo hɔ na wo nsa begya me akɔ,
na wo nsa nifa beso me mu.
11Na meka se, “Ampa ara sum mmɛkata me so
na hann nnan adesae ntwa me ho nhyia a,”
12sum mpo nyɛ sum mma wo;
na anadwo bɛhyerɛn sɛ awia;
sum ne hann yɛ wo pɛ.
13Na wo na wobɔɔ me honhom
wonwen me wɔ me na awotwaa mu.
14Mekamfo wo, efisɛ woyɛɛ me anwonwakwan so a ɛyɛ hu;
wo nnwuma yɛ nwonwa.
Minim ɛno yiye pa ara.
15Wɔamfa me bɔbea anhintaw wo
bere a wɔyɛɛ me kokoa mu no;
bere a wɔnwenee me wɔ asase bun mu no,
16wʼani huu me, bere a meyɛ mogyatɔw no.
Nna dodow a woatwa ama me no,
wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ wo nhoma mu
ansa na mu baako reba mu.
17Onyankopɔn, wo nsusuwii som bo ma me!
woka ne nyinaa bɔ mu a, ɛtrɛw dodo!
18Sɛ mise mɛkan a,
ne dodow bɛboro mpoano nwea,
sɛ minyan a,
me ne wo wɔ hɔ ara.
19Sɛ anka, Onyankopɔn, wubekunkum amumɔyɛfo ɛ!
Mumfi me so, mo a moyɛ mogyapɛfo!
20Wɔde adwemmɔne ka wo ho asɛm;
wʼatamfo mmmɔ wo din pa.
21Awurade, metan wɔn a wɔtan wo,
na mikyi wɔn a wɔsɔre tia wo no ana?
22Minni hwee sɛ ɔtan a mewɔ ma wɔn;
mefa wɔn sɛ mʼatamfo.
23Hwehwɛ me mu, Onyankopɔn, na hu me koma;
sɔ me hwɛ, na hu mʼadwene.
24Hwɛ sɛ bɔne bi wɔ me mu a,
na di mʼanim fa daa nkwa kwan so.
AKCB : Nnwom 139